Qadar oo 65 Milyan oo Dollar ku bixisay geynta ciidanka Turkiga ee dalkeeda | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Qadar oo 65 Milyan oo Dollar ku bixisay geynta ciidanka Turkiga ee...
Xog sirdoon oo la helay ayaa tilmaameysa in xubin sare oo ka tirsan xisbiga AKP ee xukuma dalka Turkiga, sidoo kalena ah ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee Turkiga uu sarkaal sirdoon oo Qadari ah ka helay lacag gaareysa 65 Milyan oo dollar si loo dadajiyo heshiiska ciidanka lagu geynayay Qadar.
Sida lagu daabacay barta Nordic Monitor oo ah bar wararka sirdoonka ah si gaar ahna xoogga u saarta Turkiga, Ahmet Beret Conkar ayaa xiriir qarsoodi ah la sameeyay sarkaal sirdoonka Qadar ka tirsan ka hor intii uusan riixin heshiiska oo la sii marsiiyay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Turkiga . Ogolaanshaha baarlamaanka ayaa horseeday in ciidanka Turkiga la geeyo dalka Qadar oo cabsi ka qabay dalalka Khaliija oo go`doomiyay.
Sida lagu sheegay warbixinta Nordin Monitor Ahmed Beret Conkar ayaa horay u ahaa guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Turkiga sanadihii u dhaxeeyay 2014-2016 intii uusan baarlamaanka dalalKa isbaheysiga NATO ku matalin Turkiga.
Dacwad ay dhageystay maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Turkiga oo lagu magacaabo Adm Surer waxa uu sheegay in eedda ah in laaluush ay Qadar bixisay ay tahay mid dhab u dhow.
Turkiga ayaa sanadkii 2015 meel mariyay saldhig milatari oo Turkigu ku yeesho Qadar taas oo qayb ka ahayd heshiiskii difaaca ee labada dal. Turkiga ayaa xilliga sheegtay in dalka Qadar ay saldhigan doonaan ciidan gaaraya 3000 oo askari si ay uga hortagaan cadawga labada dal.
Dalalka Sucuudiga, Masar, Baxreyn, Imaaraadka ayaa xiriirka diplomaasi iyo kan ganacsi u jaray dalka Qadar waxaana dalabyadooda ka mid ahaa in Qadar ay joojiso taageerada waxa ay ugu yeereen argagixisada iyo in la xiro saldhigga Turkiga ee Qadar.
Qadar ayaa ku gacan seyrtay soo jeedinta dalalkaas waxaana ay taasi keentay in xiriirkooda sii xumaado. Dalka Turkiga ayay aad iskugu dhowyihiin dalka Qadar oo siyaasad ahaan kaga duwan dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Previous articleMaxaa ka jira iscasilaadda agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya?
Next articleMaraykanka oo cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogayaasha maxkamadda ICC